Akụkọ - Ike nke ihe ịrịba ama nke n'èzí
Nnyocha na-egosi na akara ngosi n'èzí n'èzí na-ekere òkè dị mkpa na onye ahịa ma ọ bụ mkpebi onye ahịa nwere ike ịmekọrịta azụmahịa gị.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 73% nke ndị na-azụ ahịa kwuru na ha banyere n'ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa ha na-agatụbeghị tupu ọ dabere naanị na akara aka ya.
Ihe ịrịba ama gị n’èzí na-abụkarị ihe mbụ ị ga-emetụ na onye ahịa, ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ịmepụta ihe ngosi doro anya na nke na-adọrọ adọrọ nke na-adọta onye ahịa ma na-egosipụta ahụmịhe ha ga-enwe ozugbo.
Ihe dị ka 65% nke ndị na-azụ ahịa kwenyere na akara ngosi azụmahịa na-egosipụta ogo nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ya, ihe karịrị 50% nke ndị zaghachiri nyocha ahụ gosiri na akara ngosi adịghị mma na-egbochi ha ịbanye ọbụna ebe azụmahịa.
Ọ bụ ezie na ihe kachasị mkpa bụ ịnweta akara ngosi dị n'èzí maka azụmaahịa gị, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka akara ngosi na njiri mara mma wee nwee aha ọma. Dika nyocha a gosiputara, akara aka oru aka oru gha eme ka ndi ahia ghara ikwenye ahia gi. Iji hụ na ihe ịrịba ama azụmahịa gị n'èzí na-anya ụgbọ ala dị ka o kwere mee, ihe kachasị mkpa bụ ime ka ozi gị ziri ezi ma sie ike. Ọ bụrụ na ihe ịrịba ama gị na-egosi ụfọdụ iyi na akwa, ị nwekwara ike ịchọrọ itinye ego na nke ọhụrụ. Lelee nhọta anyị nke akara aka n’èzí iji chọta akara ngosi zuru oke maka azụmaahịa gị na mmefu ego gị.
Fọrọ nke nta 59% nke ndị ahịa kwuru na enweghị ihe ịrịba ama na-egbochi ha ịbanye n'ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa.
Ma eleghị anya, ị malitere obere azụmahịa gị ma nwee ọtụtụ ihe na efere gị. Ma ọ bụ ikekwe ị nọ na-eche na akara ngosi n'èzí abụghị ego bara uru. Ka o sina dị, ọnụ ọgụgụ a na-ekwughachi otu ọ dịruru mkpa ibute ihe ịrịba ama mpụga. Enweghị otu, ị nwere ike ịkwụsị azụmaahịa ma nwee ike ịnye ndị ahịa gị ikike na azụmaahịa gị enweghị ntụkwasị obi. O wutere gị otu esi ahọpụta akara ngosi dị n'èzí maka azụmaahịa gị? Jụọ onwe gị ajụjụ ndị a 5 tupu ịzụrụ iji hụ na ị ga-ahọrọ nke ziri ezi.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara, 50.7%, nke ndị na-azụ ahịa nke America achụpụwo achụmnta ego achọrọ na-enweghị ịchọta ya n'ihi enweghị akara ngosi zuru ezu.
Ohere nke mmadụ na-achọ ụdị ngwaahịa ị na-ere ma ọ bụ ọrụ ị na-enye dị elu, mana enweghị akara, kedu ka ha ga-esi chọta gị? Mepụta akara ngosi pụrụ iche, nke dị elu n'èzí maka azụmahịa gị ga-enye gị ohere ọ bụghị naanị ikwenye ọnọdụ gị maka ndị ahịa, kamakwa ịme ka ị mata mmata. N'ụzọ ahụ, oge ọzọ onye ahịa nwere mkpa maka ngwaahịa na ọrụ gị, ha ga-echeta azụmahịa gị ma mara ebe ị ga-aga.
Ọgụgụ akara akara bụ ihe ịrịba ama kachasị mkpa na-eme ka ndị na-azụ ahịa nwaa ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ụlọ ahịa.
Ndị ahịa gị nwere ike ọrụ. Ghara ikwu na ha nwere ike juputa na mgbasa ozi dịgasị iche iche kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na ihe ịrịba ama gị agaghị agụli, ọ dị mma ịsị na ha agaghị akwụsịlata ma nwaa ịchọpụta ihe ọ bụ ị na-enye. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa na ihe ịrịba ama gị na-ekpughe onye ị bụ na ihe ị na-eme n'ụzọ doro anya. Nyochaa akara (s) gị iji nyochaa na ọ gụnyere naanị ozi kachasị mkpa gbasara azụmaahịa gị yana ọnweghị ozi na enweghị isi ma ọ bụ eserese, yana agba nke ndabere na mkpụrụedemede dị mfe ọgụgụ.